अमेरिका र युरोपको मिठो सपनाले नेपाली युवाहरुको भयो यस्तो बिजोग, बिचरा ! त्यो ठाउँमा पुग्दा भए यसरी निल्नु न उकेल्नु, यस्तो सम्म भयो – नेपाली सूर्य
अमेरिका र युरोपको मिठो सपनाले नेपाली युवाहरुको भयो यस्तो बिजोग, बिचरा ! त्यो ठाउँमा पुग्दा भए यसरी निल्नु न उकेल्नु, यस्तो सम्म भयो
January 16, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on अमेरिका र युरोपको मिठो सपनाले नेपाली युवाहरुको भयो यस्तो बिजोग, बिचरा ! त्यो ठाउँमा पुग्दा भए यसरी निल्नु न उकेल्नु, यस्तो सम्म भयो
बाबियाचौर, म्याग्दी, १ माघ । म्याग्दीको प्रमुख आयस्रोत बनेको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । अवैध बाटो भएर असुरक्षित रुपमा यूरोप र अमेरिका पुग्ने सपना बुनेका युवा वर्ग जानाजान ठगिन बाध्य छन् ।
“यूरोप पुगेर धेरै पैसा पठाउँछु र हामीलाई पनि उतै लैजान्छु भन्नुहुन्थ्यो,” धनमानकी श्रीमती दालसुवाले गहभरी आँशु पार्दै भन्नुभयो – “तर कहिल्यै नर्फकने गरी यो संसारबाट बिदा हुनुभयो ।” लिबियादेखि सामुद्रिक बाटो हुँदै इटाली छिर्न नेपालबाट निस्किएका पुर्जाको सपना मानव तस्करले डोर्‍याएको बाटोमै चकनाचुर भयो ।
अवैध रुपमा गएको र अर्थाभावका कारण उनको शव नेपाल ल्याउन नसकेपछि उतै सद्गत गरेर परिवारले मगर संस्कार अनुसार काज किरिया गरेका थिए । धनमानका तीन छोरा र एक छोरी छन् । बार्‍ह वर्षीय जेठा छोरा अपाङ्ग छन् । “गरगहना धितो राखेर, ऋण खोजेर पठाएका थियौं,” दालसुवाले भन्नुभयो ।
नेपालबाट भिजिट भिसामा युएईको दुबई पुर्‍याउने र युएईको सारजाँ अजमानमा कोठा भाडा लिएर महिनौं राख्ने अनि जलमार्ग हुँदै लिबियाको बाटो भएर यूरोप पुर्‍याउने गरेको अमेरिका पुगेर फर्किएका बेनपा ६ का दीपक शर्माले बताउनुभयो । यूरोपका बेल्जियम, चिली, क्यानडा, पोर्चुगल, इटाली, स्पेन लगेर रोजगारी दिने भन्दै एक जनाबाट कम्तीमा २०/२५ देखि ५०/६० लाख लिने गरेका उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएको विप्रेषणले म्याग्दीको अर्थतन्त्र धानिए पनि सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कसैले चासो देखाएका छैनन् जसका कारण म्याग्देली युवालाई अदक्ष कामदारका रुपमा विदेशिन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अवैध बाटो भएर विदेशिँदा ठगी र जोखिम दुबै हुनेतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । रासस
January 1, 2018 January 1, 2018 Nepali Surya